कुलमानको बहिर्गमनपछि लाइन जान थालेपछि ऊर्जामन्त्रीकाे सचिवालयले दियाे यस्ताे प्रष्टीकरण — Sanchar Kendra
१ओली-प्रचण्डलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको कटाक्ष- भष्मासुरी प्रवृत्तिबाट जनताले उन्मुक्ति चाहिरहेका छन्
२सुटुक्क रअका प्रमुखसँग भेट गरेका ओलीलाई झट्का
३आज बडादशैँको सातौँ दिन, घरघरमा फूलपाती भित्र्याइँदै
४शुक्रबार मध्यराति १२ बजेबाट नेपालमा लागु हुदैछ यस्ताे कडा नियम, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
५प्रेमी दरबारसँग विवाह गर्दै बिग बोस विजेता गौहर खान, कहिले तय गरियो मिती ?
६कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या एक लाख नाघ्यो
७पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
८कोरोनाबाट थप २१ जनाको मृत्यु
९कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निःशुल्क हुने
१०२४ घण्टामा थप ३ हजार ६३७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
११ओलीले रअका प्रमुखलाई भेटेकोबारे भयो यस्तो खुलासा, नेकपाभित्र खैलाबैला, कसले के भने ?
१२कोराना महमारीका बिच तीन नयाँ पुस्तक बजारमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युत कटौती बढेको गुनासा सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेका छन् । पूर्वसूचना नदिई घण्टौं लाइन काटिनुलाई धेरै उपभोक्ताहरुले कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँग जोडेका छन् । आम उपभक्ताको आशंका छ, अब फेरि लोडसेडिङ हुने त होइन ?
लाइन काटिने क्रम बढेको गुनासो समाजिक सञ्जालमा चुलिएपछि सरकार पनि दबावमा आएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले सोमबार विद्युत कटौतीबारे प्रष्टीकरण नै दिनु पर्‍यो ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा विभिन्न मर्मत तथा प्राविधिक कारणले लाइन काटिरहेको बताएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइँ मन्त्रालयले यसलाई लोडसेडिङ नभएको प्रष्ट्याएको छ ।
सम्पर्कका लागि ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयको हटलाइन नम्बर-११५१ मा २४ सै घण्टा वा ९८५११०९८३५ मा फोन गर्न सनिको उनले जानकारी दिएका छन् । उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण विद्युत आपूर्ति कटौती बढेको मान्न तयार छैनन् ।
उपभोक्ताहरु भने झ्याप्प-झ्याप्प लाइन जाने क्रम बढेको गुनासो गरिरहेका छन् । काठमाडौं, मनमैजुका श्याम क्षेत्री हिजोआज पटक-पटक लाइन काटिन थालेको बताउँछन् । ललितपुर, टिकाथलीका सनम वैद्यले आइतबार साँझ गएको लाइन मध्यरातसम्म नआएको बताउँदै सोधे, ‘नो लाइटमा फोन नै उठेन । प्राधिकरणमा हाकिम नहुँदैमा विजुली काटिनुपर्ने कारण के हो ?’
हेटौंडाकी दिलु घर्तीले फेसबुकमा आक्रोश पोख्दै लेखेकी छिन्, ‘हिजोआज कति जान थालेको हो यो लाइन पनि ! अब विद्युत प्राधिकरण घेराउ गर्न जानुपर्छ जस्तो छ ।’
त्यस्तै, भरतपुरका प्रेम श्रेष्ठले लेखेका छन्- भरतपुर महानगरमा आज बिहान ७ः३० बजे गएको विद्युत अहिले १२ः०० बजेसम्म आएको छैन । फेरि लोडसेडिङको भारम्भ भएको कि कतै बिग्रेर हो ?’ यस्ता गुनासा अहिले समाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती भेटिन्छन् । धेरैले लोडसेडिङ हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
६३० मेगावाट आवर इनर्जी विद्युत आपूर्तिमा अवरोध भएको त्यो दिन २४ हजार ६१२ मेगावाट आवर माग थियो । खपत भने २३ हजार ९८२ मेगावाट आवर मात्र भयो । ६ लाख ३० हजार युनिट बिजुली माग भएर पनि वितरण हुन सकेन ।
अविरल वर्षा, बाढीपहिरो र हावाहुरीका कारण वितरण लाइनमा विभिन्न अवरोध हुँदा मागअनुसार बिजुली पुग्दैन । तर, पछिल्ला दिनमा त्यतिधेरै माैसमी समस्या छैनन् । तर, भदौ ३१ पछिका दिनमा पनि विभिन्न स्थानमा प्राविधिक कारणले विद्युत कटौती भइरहेको छ ।